यी ४ खानेकुराले बाँझोपनको समस्या हटाउन सक्छ - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
यी ४ खानेकुराले बाँझोपनको समस्या हटाउन सक्छ
आमा बन्ने योजनामा हुनुहुन्छ, तर गर्भधारण गर्न असमर्थ हुनुहुन्छ भने तपाईलाई बाँझोपनको समस्या हुन सक्छ । आजकल मानिसहरूले अपनाएको जीवनशैलीका कारण महिलासँगै पुरुषमा पनि प्रजनन क्षमतासँग सम्बन्धित समस्याहरू देखिन थालेका छन् ।
तनाव, डिप्रेसन, चिन्ता, अस्वस्थ खानपान, कम सुत्ने, लगातार काम गर्ने जस्ता बानीले पनि प्रजनन समस्या निम्त्याउन सक्छ । यदि महिला वा पुरुष दुवैमा बाँझोपनको समस्या छ भने गर्भावस्थामा बाधा पुग्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा प्रजनन क्षमता बढाउने खानेकुराको सेवन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
बदाम खाएर प्रजनन क्षमता बढाउनुहोस्
बदाम धेरै स्वस्थ ड्राई फ्रुट हो । यसमा पाइने म्याङ्गनीज, कपर, भिटामिन ई, बायोटिनले महिलामा हुने बाँझोपनको समस्यालाई हटाउन सक्छ । यो ड्राई फ्रुटले अण्डाको गुणस्तर सुधार गर्छ । यसले बच्चाको उचित विकासमा पनि मद्दत गर्छ । डेलिभरीको समयमा पनि कुनै समस्या हुँदैन ।
हरियो तरकारीले महिलाको प्रजनन क्षमता बढाउँछ
प्रजनन क्षमतामा सुधार गर्न, आफ्नो आहारमा अधिक हरियो तरकारी समावेश गर्नुहोस् । पालुङ्गो , ब्रोकाउली, काउली आदि खाने । यी सब्जीहरूमा भिटामिन बी, फोलेट उच्च हुन्छ, जसले ओभ्युलेसनलाई सुधार गर्छ । हरियो तरकारीले पनि कामवासना बढाउन सक्छ ।
सिमीले पनि बाँझोपनको समस्या हटाउँछ
यदि गर्भधारण गर्न असमर्थ हुनुहुन्छ भने, सिमी खान सुरु गर्नुहोस् । यसमा पाइने प्रोटिन, आइरनले अण्डाशयलाई स्वस्थ राख्छ । उच्च मात्रामा फाइबर र कम बोसोले तौल नियन्त्रणमा राख्छ ।
दूधजन्य पदार्थ प्रजनन स्वास्थ्यका लागि स्वास्थ्यकर हुन्छ
क्याल्सियम युक्त खानेकुरा खानुहोस् । यसले हड्डी स्वस्थ राख्नुका साथै प्रजनन क्षमता पनि बढाउँछ । दूध, दही, चीज, बटर मिल आदि दुग्धजन्य पदार्थ पिउनुहोस् । यी खानेकुरामा पाइने एक विशेष प्रकारको प्रोटिनले अण्डाको स्वास्थ्यमा सुधार गर्छ । अण्डाशयको काम गर्ने क्षमता राम्रो हुन्छ । ओभुलेशनको समस्या पनि समाधान हुन्छ ।
आनन्द के हो ? कसरी प्राप्त हुन्छ ?
जीवन साधना – ज्ञान, भक्ति, कर्म र क्रिया योग